तिहारअघि घरमा यस्ता बस्तुहरु भित्र्याउँदा फलिफाप हुनेछ!! – All top Here
Home/समाचार/तिहारअघि घरमा यस्ता बस्तुहरु भित्र्याउँदा फलिफाप हुनेछ!!
तिहारअघि घरमा यस्ता बस्तुहरु भित्र्याउँदा फलिफाप हुनेछ!!
तिहार हिन्दू धर्मको दोश्रो ठुलो महान चाड हो । यस पटकको तिहार कार्तिक ९ गतेबाट सुरु भई कार्तिक १२ गते सकिनेछ । तिहारमा विशेषतः लक्ष्मी र गणेशको पुजाआराधना गरिन्छ । लक्ष्मीको पुजा अर्चना गर्नाले घरमा सुख, समृद्धि तथा धन आउने विश्वास गरिन्छ भने गणेशको पुजा गरेमा घरमा आउने संकट तथा बिघ्न हटेर जाने गर्दछ। यसका साथै तिहारमा बस्तुलाई घरमा भित्राएमा लाभ प्राप्त हुनेछ:
देवी लक्ष्मीको कृपा पाउन घरमा श्रीयंत्रको तिहार अघि स्थापना गरी नियमित पूजा गरेमा यसले धनयोग बनाउँदछ । श्रीयंत्रमा देवी लक्ष्मीको अलाबा ३३ अन्य देवी देवाताको चित्र अंकित हुन्छ यसले घरमा रोकिएको धन ल्याउन मद्दत गर्छ ।
तिहार अघि मोती शंख घरमा ल्याई यसलाई विधिविधान पूर्वक पूजा गरी दराजमा राखेमा यसले तुरुन्त धन भित्र्याउने धार्मिक विश्वास छ । मोती शंख राख्दा घरमा धन टिक्ने र आम्दानि समेत बढाउने गर्दछ ।
धन आर्कषित गर्न लक्ष्मी कौडामा स्वभाविक गुण रहने भएकाले यसले अनावश्यक रुपमा बाहिरीने धन समेत खर्च हुनबाट बचाउछ । अपत्यारीलो स्थानबाट समेत धन योग बनाउने गर्दछ ।
शुक्रवारको दिन पारेर विधिविधान पुर्वक सेतो आकको जरा पूजा गरी घर भित्र्याएमा यसले धनयोग बनाउने गर्दछ । यसरी भित्र्याइएको आकको जरा पुजा पछि धन राख्ने दराज वा बकशमा राख्नाले यसले तत्काल धन ल्याउने विश्वास गरिन्छ ।
देवी लक्ष्मीलाई कमल फुल मनपर्ने भएकाले यसको बिउबाट निर्मित माला लक्ष्मीको प्रतिमामा लगाई पुजा गरेमा असम्भव स्थानबाट पनि सजिलै धन प्राप्तिको योग बन्ने धार्मिक विश्वास छ ।
।सुकुटेमा भएको भयानक बस दुर्घटनाको कारण यस्तो! दुर्घटनाकी घाइतेको बयान,बच्चालाई ‘दूध चुसाउँदै थिएँ, डुबिसकेको रहेछु’
नेपालबाट अशान्ति मच्चाउने तत्व छिर्‍यो भारतीय गृहमन्त्रीको दावी :
श्रीमानलाई साइड लगाउन श्रीमतीले दिईन निम्तो!
चितवनबाट आयो दुखद खबर, घट्यो यस्तो घ’टना